Baolina kitra – “CAN 2021” :: Miampy telo ireo mpilalao voafantina handrafitra ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – “CAN 2021” Miampy telo ireo mpilalao voafantina handrafitra ny Barea
Nitondra fanamboarana amin’ny lisitra ahitana ireo mpilalao hofantenana handra­fitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly. Hiatrika ny dingana fifa­nintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN amin’ny taona 2021 hatao any Kamerona ny ekipam-pirenena malagasy. Nanampy mpilalao telo hafa ny tekni­siana frantsay.
Tafiditra tampoka i Fabrice, mpiandry tsatokazon’ny Fosa Junios FC sy Arnaud ary Ando, izay nandrafitra ny ekipam-pirenena nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CHAN 2020.
“Mialoha ny lalaon’ny Fosa Juniors tamin’ny RS Berkane no vita ny lisitra. Nampidiriko ho mpiandry tsatokazo fahefatra i Fabrice noho ny lalao tsara nataony nandritra an’izany fifandonana izany. Roa amin’ izy efatra ihany anefa no ho tafiditra ao amin’ny ekipam-pirenena”, araka ny fanazavan’i Nicolas Dupuis.
Mbola hiova ireo mpilalao
Noesorina tamin’ilay lisitra nivoaka tamin’ny talata lasa teo Razakanantenaina Pascal, vodilaharan’ny klioba renioney JS Saint Pierroise, sy i Henri Charles Gladyson, lohalaharan’ ny Union sportive sainte-ma­rienne, klioba frantsay any La Réunion. Nampian’ny mpana­zatra nasionaly fa “Nandà ny handefa an’ireo mpilalaony ny klioban’izy roa lahy. Azony atao izany noho izy ireo klioba mbola tsy matihanina. Manome vintana ho an’ireo mpilalao hafa ihany koa izany”.
Hanomboka amin’ny 11 novambra ka hatramin’ny 22 novambra ho avy izao ny fampivondronana an’izy dimy amby roapolo mira­halahy eto Antananarivo.
Hihaona voalohany amin’i Etiopia ny Barea, amin’ny 16 novambra 2019, eny amin’ny kianjaben’i Maha­masina amin’ny 4 ora tola­kandro. Hanainga ho any Nizera avy hatrany ny ekipam-pirenena malagasy, ny 17 novambra 2019. Hotontosaina amin’ny 19 novambra ho avy izao ny lalaony amin’ ny Nizera.
Marihina fa mety mbola hiova ireo mpilalao ireo amin’ny fifandonana amin’ny Côte d’Ivoire amin’ny taona 2020. Nilaza i Nicolas Dupuis fa “tsy midika ho tsy ao amin’ny lisitra ireo mpilalao hafa raha toa ka tsy tafiditra izy ireo amin’ny lalao hatao amin’i Etiopia
Famatsiana rano :: Ilaharana be ireo sinibe napetraky ny orinasa Jirama
Famotsoran-keloky ny filoha :: Voafonja enina navoaka teny Antanimora